Hoggantoota addunya walgahii NETO irratti hirmaatan keessaa
“NATO-n gara fuul-duraatti tarkaanfiin fudhatu, duula farra-shororkeessummaa, dhimma godaantotaa, doorsisa Raashiyaa irraa dhufuu fi biyyoota gama Bahaa fi Kibbaatiin NATO daangessanitti fuuleffachuu of keessaa qabaachuu qaba – jedhan – Traamp.
Prezidaantiin Yunaayitid Isteets – Doonaald Traamp, har’a haasawa walga’ii hoogganoota NATO irratti haasawa dhageessisaniin, gamtichi, gama damee ittisaatii ka maallaqni itti hanqatu ta’uu ibsanii jiran. NATO-n irra-jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiran.
Miseensonni NATO, maallaqa itti ramadamee baasuuudhaan akka dirqama isaanii bahan illee hubachiisan.
Biyyoota miseensota NATO 28 keessaa 23 dirqama isaanii ba’uu hanqachuun, uummata Yunaayitid Isteetsiif, gochaa haqaa miti – jedhan.
Haleellaan Boombii of-wareeginsaa torba kana Maanchester keessatti geggeessame, gad-fageenya gochaa hammeenyaa shororkeessummaa fuul-keenya dura jiru agarsiisa – jechuun illee dubbatan.